Raha Manao Dingana Amin’ny Fandroahana i Etazonia, Ireo Mpisolovava Kosa Manosika Ny Hanomezana Sata Mpifindramonina Ho An’ireo Amerikàna Tanivo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2016 16:35 GMT
“Voajanahary ny Fifindramonina, Tsy Izany Kosa Ny Fandroahana.” Sary nalaina tao amin'ny kaonty Flickr an'i Joe Brusky, nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
An-jatony maro ireo Amerikàna Tanivo sy ny mpanohana azy ireo no nifamory teo anoloan'ny Trano Fotsy ny Alarobia 30 Desambra lasa teo mba hanohitra ny fisokon'ilay drafitra Amerikàna momba ny fandroahana manomboka ny 2 Janoary.
Araka ny nosongadina tao anatin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Washington Post, amin'ny Taona Vaovao ny Departemantan'ny Fiarovam-Pirenena dia miomana ny hanao bemidina tsara kendry.
Ilay fanentanana manerana ny firenena, hiandraiketan'ireo mpiasan'ny Fampiharana Lalànan'ny Fadintseranana sy ny Fifindramonina ao Etazonia, vantany vao manomboka ny Janoary, no mety ho voalohany amin'ny ezaka goavana indrindra handroahana ireo fianakaviana nandositra ny herisetra tany Amerika Afovoany, hoy ireo efa mahalàla tsara ilay drafitra.
Ambaran'ilay lahatsoratra fa ilay drafitra dia hifantoka amin'ireo olondehibe sy ankizy efa namoahan'ny mpitsara momba ny fifindramonina didy fampodiana, raha sady miaiky ihany fa noho ny tsy firindran'ny raharaha, dia marobe ireo tsy nahalàla akory ny fisian'ireo didy ireo.
Mpitarika iray nipongatra avy tao anatin'ny tolona manohitra ny fandroahana i Gustavo Torres, tale mpanatanteraky ny CASA de Maryland, fikambanana iray izay nanampy ireo Amerikàna Tanivo mpitsoaponenana nanomboka tamin'ny 1985. Hoy i Torres, raha niteny tao amin'ilay hetsi-panoherana :
Tianay ambara amin'ny Departemantam-Piarovana sy ny Filoha Obama fa raha toa ry zareo miroso amin'io drafitra io, ho faty hisy hamono any amin'ny firenena niaviany ireo fianakaviana ireo, ireo ankizy ireo.
Tokony homena sata mpialokaloka ireo Amerikàna Tanivo ireo, hoy i Torres nanamafy, satria i Goatemalà, El Salvador sy Hondorasy, ireo firenena telo izay voatondro handroahana azy ireo hiverina, dia miaina haavo faran'izay ratsy indrindra amin'ny resaka herisetra nandritra ny 30 taona farany teo.
tianay ry zareo mba hanome TPS ho an'ireny mpitsoaponenana ireny (TPS=temporary protection status – sata fiarovana vonjimaika) ary hanatsahatra ny fandroahana. Izany no antom-pisianay eto.
Nametraka sosokevitra iray ny CASA de Maryland sy ireo fikambanana hafa mitovy fisainana aminy mba hananganana tambajotra-nà mpisolovava manerana ny firenena, mpiasa sosialy, fikambanana vondrom-piarahamonina sy mpiasa an-tsitrapo hiantoka ny fiarovana ireo mpitsoaponenana .
Tonga eto nandositra ny herisetra & fahantràna any amin'ny fireneko aho. Tonga niaraka tamin'ny fanantenana vaovao ho an'ny fiainako
Nametraka ihany koa izy ireo fanentanana fanabeazana iray mba hampahafantarana ny fiarahamonina ny zon'izy ireo raha sendra tonga any an-tranony ireo manampahefana momba ny fifindramonina. Tamin'ny faran'ny herinandro, niseho tao amin'ny fahitalavitra miteny Espaniola i Torres ary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny CASA nitondra torohevitra ho an'ireo fianakaviana tandindonin-doza.
Tadidio, tsy maninona raha toa ianao manana antontan-taratasy. Manana zo eto amin'ity firenena ity ianao. Hanombohana azy, raha tonga ao an-tranonao na eo am-baravaranao ny avy amin'ny fifindramonina, aza mamoha. Angataho izy ireo hanisika taratasy kely momba azy, miaraka amin'ny didy fandroahana, eo ambany varavarana…. Raha anontaniany anao ny firenena niavianao na ny anaranao, lazao azy ireo fa tsy te-hanome torohay na inona na inona ho azy ireo ianao ary mila mpisolovava.
“Ny tokony hatao raha tonga eo am-baravaranao ny mpiasan'ny Fampiharana Lalànan'ny Fadintseranana sy ny Fifindramonina (ICE) .” Sary torohay avy amin'ny “United We Dream”
Niaina herisetra tamin'ny fàtra faran'ny avo i Amerika Afovoany, miaraka amin'ireo tanora ataon'ireo andian-jiolahy lasibatra, toy ny Mara Salvatrucha, na ny MS-13, sy Barrio 18, izay fantatra tany amboalohany tamin'ny hoe Jiolahimboton'ny Arabe faha-18, noho ny toerana niaviany ao amin'ireo araben'i Los Angeles. Raha ny marina, ireo andian-jiolahimboto roa, na ny “pandillas” araka ny iantsoana an-dry zareo ao El Salvador, dia teraka avy amin'ny politikan'ny fandroahana nihazakazaka teo ambany fitarihan'ny Filohan'i Etazonia taloha, Bill Clinton, tany amin'ny 1990 tany, nampiharina tamin'ny fotoana nivoahan'ny firenena tamin'ny ady an-trano sy naharavàn'ny polisiny. Noroahana ireo andian-jiolahimboto niforona teny an'arabe tao Los Angeles, izay nanana fifamatorana ara-anarana tamin'ny tany nahaterahany, ary nitambatra tamin'ny tsy fisian'ny politika momba ny fangatahana fampodiana, nàka an'i Amerika Afovoany ho toerana fiafenany ireo hafa mpanao heloka bevava. Araka ny lahatsoratra iray tamin'izany fotoana izany tao amin'ny New York Times :
Mety tena henjankenjana kokoa ny toedraharaha eto, saingy tsy irery i El Salvador amin'ny fahatairany manoloana ny politikan'i Etazonia momba ireo voaroaka. Manerana an'i Amerika Afovoana sy Karaiba, miala avy any Goatemalà atsinanana mankany Goiana, naneho hatezerana sy hasorenana noho ny olona ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, olana izay raisin'izy ireo ho toy ny teren'i Etazonia hozakain-dry zareo no sady mihoatra noho izay fahafahan'izy ireo mifehy azy.
Amin'ireo ankizy efa ho 70.000 voasambotra teo ampiezahana ny handingana ny sisintanin'i Etazonia tamin'ny 2014, 73% no avy any Goatemalà, El Salvador sy Hondorasy. Na eo aza ny lalàna Amerikàna vao haingana toy ny DREAM Act (izay fanafohezana ny hoe Development, Relief and Education for Alien Minors), DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) sy DAPA (Deferred Action for Parents of Americans), dia raisina ho lohalaharana amin'ny fandroahana ireo Amerikàna Tanivo, eo ambanin'ireo torolàlana vaovaon'ilay Departemantam-Piarovam-Pirenana, izay mikendry ireo vao tonga tsy ela sy ireo tsy manana fifamatorana na amin'iza na amin'iza ao Etazonia.